Midowga Yurub kama bixi doonaan Heshiiska Niyukleer ee Dowladda Iiraan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMidowga Yurub kama bixi doonaan Heshiiska Niyukleer ee Dowladda Iiraan
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Iran, Maxammad Javad Zarif,ayaa sheegay in uu qiyaasayo in Mareykanka ay isaga tala bixi doonaan heshiiskii caalamiga ahaa ee lagu xaddidayay howlaha Niyukleerka Tehran.
Golaha Kongreska Mareykanka ayaa bisha soo socota billaabi doona in mar kale cunaqabatayn lagu soo rogo Iiran haddii madaxwayne Trump uu sheego in Tehran ay ku guuldareysatay in ay u hogaansanto heshiiska.
Mr Zarif oo wareysi siinayay laba wargeys oo ka soo baxa UK ayaa sheegay in uu rajaynayo in dalalka Yurub ay heshiiska sii wadi doonaan.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran, Mohammad Javad Zarif,ayaa ku dooday in cunaqataynta cusub ee Mareykanka ay wadamada midowga Yurub ay maalgashadayaashooda siin doonaan difaac dhanka sharciga ah.
Waxa uu xitaa sheegay mr Zarif in midowga Yurub ay keeni doonaan tillaabooyiin ay uga hortagayaan cunaqabataynta Mareykanka.
Madaxwayne Trump ayaa khudbad uu dhawaan ka jeediyay kulankii golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey waxa uu si kulul u canaabaareeyay dowladda Iran.
Mr Trump ayaa dhaliilay heshiiska Iran ay la gashay xukuumaddii isaga ka horeysay ee uu hogaaminayay Brack Obama.